Zvinotyisa. Iyo terevhizheni inoenderana neyano naDan Simmons inosvika | Zvazvino Zvinyorwa
Mifananidzo. (c) AMC
Vanoda nhoroondo yenhoroondo ye nautical genre, adventures uye zvinobata zvekutyisa uye zvemweya isu tiri mune mhanza. Iyo April 3 kutanga Zvinotyisa, kuchinjika kweterevhizheni uko chiteshi chakagadzira AMC yeiyo isingazivikanwe nhoroondo yemunyori weNorth America Dhani simmons. Ndiri kuona rig, bowsprit, sextant uye iwo Royal Navy yunifomu uye ini ndave kutotanga kudedera nemanzwiro
Kana zvekare kuseri kwekugadzirwa kweichi 10-episode dzakateerana iye mukuru wemu cinema senge Ridley Scott, chigadzirwa chacho chinotova nechivimbiso chakakwana chehutano. Kuti uwedzere pamusoro kugovera zvakagadzirwa ne mazita ane mukurumbira pachiitiko cheBritish, yakanaka kune nyaya uko iyo kutonhora, kupesana, kutya uye kukakavara ndivo vatambi vakuru. Ngatitarisei nekuti zvine chokwadi kuti zvinogona kukufadza.
1 Dhani simmons
3 Iyo inoverengeka
Simoni imwe ye sainzi yekunyepedzera sainzi, mhando yaanorima mune akati wandei emanoveli ake. Zvirokwazvo vanozivikanwa zvikuru ndivo Hyperion y Kuwa kweHyperion, pamwe nemhedzisiro yayo endymion y Kusimuka kweEndymion. Asi anga ave akawandisa zvikuru mune dzimwe nzvimbo dzakadai se kufara (Darwin scalpel) hora, ine mazita akadai Zhizha rakasviba uye izvi Zvinotyisa. Yakatumirwa mukati 2007, munyori aivimba ne Nyaya yechokwadi zvakaitika mu XIX remakore izvo zvakaguma, nenzira isinganzwisisike, hupenyu hwa 129 vafambi.
Muna 1847, ngarava mbiri dzeBritish Navy, iyo HMS Erebus and the HMS Kutyisa, pasi pekurairwa nashe John Franklin, Vakanamirwa muchando che Arctic. Vaida kutsvaga ndima ya Kuchamhembe kwakadziva kumadokero, asi chando chakavadzivirira ramba uchifora uye pedzisa kufambisa kwako. Vakakomberedzwa nechando chinotonhora uye nenjodzi dzemarudzi ese, ivo vaigona kungomirira kuti iyo nyowani isvike.
Asi mazuva akafamba uye kupona kwakawedzera zvakanyanya, netembiricha dzakapfuura madhigirii makumi mashanu pazasi pe zero, kushomeka yezvipo uye kudzikira yezvikepe. Iyo zvirwere kuti zvishoma nezvishoma ivo vaikanganisa hunhu uye tariro yevashandi. Iyo kubata kwakanaka iyo munyori anopa kune iyi nyaya ndiko kuvapo kwe chikara uye chakavanzika chisikwa kuitira kuti vaparadzwe. Nerufu rwekutanga zvipoko zvinoonekwawo, senge zveiyo kupandukira, the mhirizhonga kana the kudya vanhu kupedzisa kusajeka mufananidzo.
Muchokwadi ivo vakatumirwa kwemakore kutsvaga uye kununura mafambiro kuyedza kujekesa chakavanzika chekutsakatika kwezvikepe uye kutsvaga remagumo evarume gumi nevaviri pakati pevakuru, vafambisi vengarava nemasoja. Vakakwanisa kuwana zvipfeko uye inoramba yakaita makuva, miviri yakadimburwa, zvinhu zvemunhu, mabhuku, zvombo uye zvishandiso zvekutsvaga. Zvakare, uye kune kushamisika kwenzanga yeVictorian panguva iyoyo, vakawana mapfupa emunhu aine mamaki akagadzirwa nezviridzwa zvakapinza izvo zvaigona kureva kuti varume vezvikepe zvese vaifanira kuenda kune vanodya nyama kuti vararame.
Izvi zviitiko zvaive nesimba rakakura uye mazita anoyevedza senge, semuenzaniso, Charles Dickens, vakaramba kusahadzika kukudzwa kwevarume veRoyal Navy. Izvo zvakabatsira zvakawanda kuwedzera ngano uye chakavanzika chekuti imwe yezvikepe yaive iyo HMS Kutyisa.
Inotsanangurwa senge inoverengeka nhoroondo uye zvinotyisa nezvinhu zve Anonakidza mabhukuPamwe izvo zvemashura zvinobata zvinogona kusabvumidza iyo yakajairika nhoroondo yenhoroondo kuverenga. Uye zvinopesana. Zvichida iko kuongororwa kwevatambi uye kurondedzerwa pane dzimwe nguva kwakati kurei hakuiti kuti muverengi anoda zvimwe sainzi fungidziro. Asi pasina kupokana kubata kunotyisa kuzere kune wese munhu.
Iyo yakarongedzwa muzvitsauko zvinoenda kuchinjanisa maonero ehunhu hwako main uyezve mamwe echipiri. Avo vakazvitsaurira kuna Captain we HMS Kutyisa, Francis Moira Crozier neavo vanotarisa chiremba anovhiya chiremba Harry Goodsir. Iyo yekupedzisira yakanyorwa mumunhu wekutanga senge dhayari. Ivo vanotsanangura zuva nezuva zuva rechiremba dzimwe nguva vakatarisana ne kufa noutsinye kubva kuvarume vevose vari vaviri vashandi, kungave kubva pakurwiswa nechisimba cheropa chisvinwa kana kubva kuzvirwere zvakaita se scurvy.
Zvakare kucherechedzwa hunhu hwemudiki Eskimo anonzi Silent Lady uye izvo zvinoita sekushungurudza vamwe veva protagonists.
Tinogona kupedzisa kuti inoverengeka ine musanganiswa wezvinhu zve Stephen King, Patrick O'Brian, Jules Verne, Herman Melville uye kutya mune yakachena maitiro Allan poe.
Vatambi venhevedzano vazere nevakuru veBritish vane mukurumbira. Pakati pevamwe:
Jared harris (Kupenga Varume, Iyo Korona), uyo anotamba naFrancis Crozier, kaputeni weHMS Terror.
Ciaran Hinds (Mutambo weZigaro, kana Julius Caesar mukati RomasaSir John Franklin.
Paul Akagadzirira (Makafu, Utopia) saDr. Henry Goodsir;
Tobias Menzies (Outlander, Roma, Mutambo waMatombo) anonzi James Fitzjames, nhengo yeBritish Royal Army.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Zvinotyisa. Iyo terevhizheni inoenderana neDan Simmons 'inoverengeka inosvika